Blizzard izao dia milaza fa mitaky ny zon'ny mpamorona amin'ny fanovana lohateny | Avy amin'ny Linux
Blizzard izao dia milaza fa mitaky ny zon'ny mpamorona amin'ny fanovana lohateny
Blizzard Entertainment dia mpamorona lalao sy mpaninjara lalao video Amerikanina. Fantatra amin'ny fiakarana be amin'ny sangany Warcraft, Diablo sy StarCraft, ary koa ny MMORPG World of Warcraft, nanjary mari-pahaizana ho an'ny paikady tetikady3 sy MMORPG.
Amin'ireny, Warcraft III lasa iray amin'ireo malaza indrindra ary izay nipoitra mods isan-karazany, izay nampivelatra ireo mpankafy ny lalao. Avy amin'ireo mods ireo dia nantsoina iray manokana Fiarovana ny Ntaolo (fantatra amin'ny anarana hoe Dota) izay ho azon'i Valve avy eo izay tamin'ny androny dia nifanandrina tamin'i Blizzard Entertainment izy ho an'ny zon'ny lalao.
Tao anatin'ity tranga ity dia very tanteraka i Blizzard ary ny tsara indrindra azony natao dia ny nahatratra ny 'fifanarahana ifanaovan'i' Valve momba ny mari-pamantarana 'DOTA' ary koa manana ny zon'ny mpankafy hampiasa ny mari-pamantarana amin'ny fomba tsy ara-barotra, fa kosa hiala amin'ny anarana DOTA ny anarany variant ofisialy.
Nangina nandritra ny taona maro izany resabe izany, fa izao kosa dia nanapa-kevitra ny handray andraikitra indray ny Blizzard Entertainment, na dia tsy mifanohitra mivantana amin'ny DOTA aza ary tsy ao an-tsainy ny hampiakatra fitsarana ambony indray izay tapaka taona maro lasa izay.
kosa, nanjary fantatra tamin'ny lahatsoratra iray Blizzard vao haingana, izay sivana izay tadiavin'ny mpanonta hahazoana antoka fa zony tanteraka izao lalao hafa nalaina avy tamin'ny fanovana ny lohateny.
Toy izao no mipoitra ny fanavaozana farany ny politikan'ny fampiasana ny editor, izay amin'ny antsipiriany amin'ny antsipiriany ao amin'ny lahatsoratra izay
Ny lalao manokana dia mijanona ho fananan'ny Blizzard irery ihany. Tsy ferana io voalaza etsy ambony io, dia omenao an'i Blizzard ny zonao rehetra, ny lohateny ary ny tombotsoanao amin'ny sy amin'ny Custom Games rehetra, ao anatin'izany, fa tsy ferana, ny zon'ny mpamorona ao anaty ny lalao Custom rehetra.
Raha misy antony na antony, ny fahafahanao manome zon'ny lalao manokana any Blizzard dia voasoroka na voafetra, dia omenao Blizzard lisansa manokana, maharitra mandrakizay, manerantany, tsy misy fepetra, tsy misy mpanjaka ary tsy azo ivalozana ahafahan'ny Blizzard mampiasa azy tanteraka. ny lalao namboarina (na ny ampahany aminy) na amin'ny lafiny inona na amin'ny fomba ahoana.
Ho fanampin'izay, manaiky ianao fa, raha manapa-kevitra i Blizzard fa ilaina izany, dia hanatanteraka asa ampanaovina amin'ny ho avy sy / na antontan-taratasy mifandraika amin'ny fahazoana izany fangatahana izany avy amin'i Blizzard mba hahatanteraka ny tanjon'ity fehintsoratra ity.
Raha fady mandrara anao tsy hamindra na hanome ny zonao ara-pitondrantena any Blizzard araka ny lalàna manan-kery dia avelanao hiala, raha avelan'ny lalàna, ny zo ara-pitondran-tena na mitovy amin'izany mety anananao amin'ireo lalao rehetra fanao mahazatra ireo, tsy misy tambiny. . »
Na dia niova aza ity politika Blizzard ity, Mety ho hetsika hafahafa izany, ny marina dia izany mety ho hetsika izany Prevensive noho ny famotsoran'i Blizzard an'i Warcraft III: Reforged ary mandray fepetra ianao hisorohana ny zavatra mitovy aminao izay nanjo anao tamin'ny DOTA tsy hiverina intsony.
Farany, Ny fanovana politika vaovao nataon'i Blizzard dia tsy henjana raha ny resaka, satria mamela ny mpankafy hanao mods ny asany (na dia eny aza, ho takalon'ny zavatra rehetra izay an'i Blizzard). Fa i Blizzard dia nampiseho fa mahatakatra ary miaiky fa ny asa vitan'ny hafa tsy very maina satria ireo afaka mamatsy vola ny tetikasan'izy ireo amin'ny fanomezana izy ireo.
Amin'ny ankapobeny, Blizzar, raha sendra mahita fahombiazana amin'ny mod, io dia manakana ny mpamorona hafa na orinasa hafa na olona hafa tsy hividy ny zony.
Raha tsy nahazo alalana tamin'ny alàlan'ny fanoratana an-tsoratra i Blizzard dia voarara ny fanaovana lalao Custom ho tombom-barotra. Ho fanampin'izay, Blizzard ihany no afaka mivarotra, manofa, na manome fahazoan-dàlana amin'ny Custom Game, ary ny Custom Game dia mety tsy misy fiasa manohana ny fifanakalozana hividianana fitaovana na votoaty tsy ilaina.
Fantatr'i Blizzard fa ny famoronana lalao Custom dia mety mitaky fotoana sy loharanon-karena be dia be ary noho izany dia mamela ny mpamorona hamatsy vola ny volany amin'ny fampandrosoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Blizzard izao dia milaza fa mitaky ny zon'ny mpamorona amin'ny fanovana lohateny
Tonga miaraka amin'ireo fanovana ireo ny kinova OpenMandriva Lx 4.1 vaovao
Janoary 2020: Ny tsara, ny ratsy ary ny mahaliana an'ny Free Software